OEM okanye ODM zamkelekile.
Samkela order / kwetyala encinane umxumi ukuba utshekishe ukuba ngaba iimveliso ngokufanelekileyo emarikeni.
Iya kuba almot online kufumaneka inkonzo yeeyure eziyi-24 kwinkampani yakho kakhulu.
Ndiyavuya ukuva kuwe kungekudala kwaye uqale ubudlelwane ishishini kunye nenkampani yakho nokuzixabisa.
Ukuba unayo omnye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd
Idilesi Company: Shentan Industrial Zone, Liling, Hunan, 412200
Gem30 Gem40 Gem45 Gem50 Gem65 Crucible i-crucible yobushushu obuphezulu